Cabdilaahi Dool oo u waramey wargeys ka soo baxa dalka Israel. | Radio Hormuud
Cabdullaahi Dool oo ah nin soomaaliya oo u shaqeynjiray wasaaradda arrimaha dibedda Soomaaliya, ayaa dhawaan shaqada laga eryay markii la sheegay in uu qoraal uu tweterka soo dhigay ku sheegay in ay haboontahay in Soomaaliya ay xidhiidh la yeelato dawlada Israel.
Hadaba waxa ay warar kaaq sheegayaan in uu hada Soomaaliya ka cararay isaga oo naftiisa u baqanaya.
Wareysi uu siiyey wargeyska Times of Israel ayuu ku sheegay in weli uu aaminsan yahay xidhiidh dhex mara Soomaaliya iyo Israel, wuxuuna dalbaday in dowladda Soomaaliya ay cudur-daar ka bixiso erigiisa.
“Waxaan aad u taageerayaa in dalkayga xidhiidh diblomaasiyadeed la yeesho Israel. Waxaan ogahay in dad badan ay sidoo kale arrintan ila qabaan. Waxaan sidoo oo kale is-weydiinayaan waxa ay waqti badan u qaadatay” ayuu Cabdullaahi Dool ku yiri wareysiga uu siiyey wargeyska kasoo baxa dalka Yuhuuda.
“Waxaan rumeysanahay in xidhiidh lala yeesho Israel ay dan u tahay labada dal. Mid ka mid ah sababaha aan u doonayo in xidhiidh uu na dhex-maro anaga iyo Israel ayaa ah inay naga caawin karto la-dagaalanka argagixisada” ayuu yiri Cabdullaahi Dool.
“Waxay ahayd arrin soo daahday. aas-aaska xidhiidh diblomaasi oo dhex mara labada dhinac, cidna dhib uma gaysanayso, balse waxay sare u qaadaysaa nabadda iyo wada-shaqeynta” ayuu yidhi Cabdullaahi Dool.
“Waxaan rumeysanahay in Israel ay naga caawin karto dhameynta rabshdaha dalkeena ka socda, Israel waxay noo furi kartaa albaabo badan sababtoo ah saameynta ay ku leedahay dunida. Waxaan aaminsanahay in xidhiidh aan la yeelano Israel ay ahayd in mar hore la aas-aaso” ayuu hadalkiisa kusoo gabogabeeyay.
Soomaaliya iyo Israel weligood xiriir ma yeelan. Villa Somalia ayaa markii la eryey Cabdullaahi Dool sheegtay inay Sooomaaliya iyo Israel aanu marnaba xidhiidh dhex-mari doonin inta Israel ay haysato dhulka Falastiiniyiinta.